4.95dị Scandinavian nke 2mXNUMX, athlọ ịsa ahụ Di na Nwunye a dị ịtụnanya karịa ime ụlọ ebe a!
Home / blog / 4.95dị Scandinavian nke 2mXNUMX, Blọ ịsa ahụ Di na Nwunye a dị ịtụnanya karịa ime ụlọ ebe a!
4.95dị Scandinavian nke 2mXNUMX, Blọ ịsa ahụ Di na Nwunye a dị ịtụnanya karịa ime ụlọ ebe a!
2020 / 10 / 15 nhazi ọkwablog 1027 0
Islọ bụ ebe anyị hụrụ n'anya ịnọ, nke nwere ezigbo onye hụrụ anyị n'anya, ndị nne na nna kachasị amasị anyị, yana ụmụaka kachasị mma. Lọ, ọ bụghị naanị uru ejiji, kamakwa ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ.
Okwu ikpe nke taa bụ banyere ndị nwe ụlọ bi na Quanzhou, bụ ndị nwere uto pụrụ iche na ejiji, dịka nhazi nke ahaziri iche, ma nwee nnukwu ihe chọrọ maka nchekwa ụlọ ịsa ahụ.
Dabere na ọnọdụ na mkpa nke ndị nwe ya, onye mmebe Peng Huiyan si Quanzhou họpụtara usoro Santa Monica dabara nke ọma maka ezinụlọ na-eto eto na nke ejiji.
Mpaghara ： Kelleixiang Villa
Mpaghara: ihe dịka 4.95m2
Okirikiri nhọrọ ukwuu: U-yiri okirikiri nhọrọ ukwuu
Ebe ọrụ: Ebe ịsa ahụ, ebe ịsa ahụ, ebe dị mma
The mmebe, Peng, e mere na Scandinavian freshness isiokwu na-ewu ewu ugbu a. Ejiji Morandi agba atụmatụ, obere saturation nke acha anụnụ anụnụ, isi awọ, dị jụụ ma dị nro. Usoro dị mfe nke ogwe ụzọ na-enye ohere ka ọ bụrụ nke mmadụ siri ike.
Nhọrọ nke mgbidi ahụ bụ obere taịl nile na-acha ọcha na-acha ọcha, nke nwere taịlị na-acha odo odo na-ekpo ọkụ karị, mgbe ahụ afọ 10 anaghị adịkarị agafe agafe.
Na-asa ebe na-eji mirror mirror + nghọta n'ala kabinet + elu nghọta kabinet Nchikota, adaba ebe wuru ụlọ mposi n'akụkụ elu kabinet + elu nghọta kabinet Nchikota, dum Nchikota nke ụlọ ịwụ mbanye aka karịa 50%, nke mere na ezinụlọ ahụ dum nwere ebe a na-asa ahụ onunu.
1, Ebe Asa
Maka onye nnabata ọkaibe, kedu ka ọ ga - esi bụrụ enweghị ụdị nlekọta anụ na ngwaahịa mma. Onye mmebe Peng gbasaa ikike nke enyo na kere oghere na-azọpụta mpịachi ụzọ mirror kabinet iji chekwaa nlekọta anụ ahụ na ngwaahịa etemeete. Mma nwanyị mara mma na-amalite site na mposi na nlekọta anụ ahụ kwa ụbọchị.
(Santa Monica PLWY19064 gbasara mkpokọta)
Ultra-thin imewe nke countertop bezin na nwa foset, agba ojii na agba ọcha kachasị kpochapụwo, na-enweghị nke ejiji. High agba uru nke ogbo bezin, ka dum countertop udi ọzọ nka ekpomeekpo, agadi uche zuru. The countertop bezin dị mfe iji wụnye, na ọ bụ na-nnọọ adaba iji dochie ịke mgbe e mesịrị.
(Santa Monica PLWY19064 usoro)
Black iron bụ ụgbụ dị ọkụ n’ime afọ ole na ole gara aga, ma n’ezie ụlọ mara mma enweghị ike ịchọ mma. Melite n'okpuru mirror kabinet matte black iron storage tier, na-eme ka ụdị ejiji nke ụdị Scandinavia mara mma.
The kenha nghọta igbe bụ nke mbughari ma enwere ike gbanwee dika omume onye nwe ya si emebu, enwere ike itinye ya aka ekpe ma ọ bụ aka nri.
Enyo ahụ nwere ibo abụọ n'ọnụ ụzọ dị elu na-adị ogologo, nke nwere ike ijide ọtụtụ ihe ma jiri iko laminate kewaa ya n'ime, na-eme ka ọ dị mma ma na-edozi ma na-adaba adaba maka nhazi kwa ụbọchị.
Designer Peng họọrọ nke a ime ụlọ ịwụ imewe imewe, ọ bụghị naanị na uru nke ihu ọzọ agụụ nke ezinụlọ na-eto eto ejiji, na ụfọdụ nkọwa nke ọrụ dịkwa oke "kpachara anya".
N'okpuru bezin ahụ bụ ọkara zoro ezo drọwa, na-adịkarị ka ọ bụ naanị oghere a na-emeghe, ọ bụrụhaala na dọrọ drawer na njedebe, ị ga-ahụ nnukwu ụwa n'azụ ọgba aghara ahụ, ohere a kachasị mma itinye ụfọdụ ihe nzuzo.
2, Mpempe Mpaghara Dị Mma
Omenala ime ụlọ ịwụ ahụ ọdịnala, belụsọ maka mma nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi ọ bụla nke igbe anụ ahụ, dị oke nhịahụ ma dị njọ. Onye mmebe Peng wuru ụlọ nchekwa nchekwa a n'akụkụ ụlọ mposi, nnukwu ikike, echiche zuru oke nke imepụta, enweghị ike ịme nchekwa, kamakwa rụọ ọrụ ịchọ mma, jiri otu nkume were nnụnụ abụọ gbuo.
Na okpuru nke sideboard bụ ihe na-emeghe nke ihe dịka 300mm n'ịdị elu, nke na - eme ka ọ dị mfe iru n’enweghị ebuli ma gbagọọ agbagọ. Na mgbakwunye na akwa nhicha akwụkwọ, ọnọdụ a nwere ike ijide ọtụtụ ihe dịka ekwentị, igodo, aromatherapy, na ndị ọzọ.
Ọkara nke ime ụlọ na-emeghe bụ ihe kachasị amasị gị maka ịchekwa ihe ndị dị ka disinfectant, akwa nhicha akwụkwọ, na ihe ndị ọzọ.
Dị ka ọtụtụ ezinụlọ na-eto eto, ndị nwe ha na-elekwasị anya n'ịdị ndụ, yabụ ha na-ahọrọ ụlọ mposi mara mma. E jiri ya tụnyere ụlọ mposi ọdịnala, ụlọ mposi nwere ọgụgụ isi nwere oche oche, saa mgbe mposi na ọrụ ndị ọzọ, ka ụlọ mposi wee mee ka nkasi obi dị okpukpu abụọ.
3, Onyinye Mpaghara bat
Maka ha saa mmiri, ha họọrọ metal nkecha na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide. Matte black metal with small white taịl nile, ọ nwere ike ịbụ ihe kachasị na nchikota.
Black showerheads na-ewu ewu karịa na ezinụlọ ndị na-eto eto, na agba ojii nwere mmetụta dị oke mma, na-emesapụ aka ma na-adịgide adịgide, ọ gaghị adị nká ruo ọtụtụ afọ.
Anyị ga-eme ụlọ ịsa ahụ kwa ụbọchị, nke ọma na nke na-ekpo ọkụ, ejiji na ọmarịcha oghere, nwere ike ime ka anyị nwee mkpali kwa ụbọchị. Designdị ụlọ a dị na Kailai Xiang Villa, Quanzhou, emetụla gị?
Nke gara aga :: Kohler were ụlọ ọrụ Smart Bathroom maara nke ọma n'ụlọ ikpe maka ihe karịrị nde $ 1.4 na Mmebi Osote: Ndụmọdụ Blọ mposi Kachasị Mma Mgbe Niile, All Na Otu Ebe!